Olee otú iji tọghata QuickTime MOV ka MP4 kasị na Mac / Win (Win 8 gụnyere)
Somtimes i nwere ike ịhụ na gị na MOV videos-apụghị egwuri na Blackberry, PDA, ama ma ọ bụ PSP. Ọbụna ụfọdụ MOV faịlụ dị nnọọ ike na-egwuri na gị QuickTime, ma ọ bụ n'ebe dị nnọọ ụda ma ọ dịghị foto. Otú ọ dị, MP4 bụ ndị kasị ewu ewu video formats maka ntị, mbadamba, na ngwaọrụ ndị ọzọ. Ị nwere ike iji a video akakabarede ngwá ọrụ iji tọghata MOV ka MP4. Mgbe ahụ ị pụrụ onwe enwe gị QuickTime MOV faịlụ n'ebe ọ bụla na n'oge ọ bụla.
Part 1: Best QuickTime MOV ka MP4 Video Ntụgharị
Part 2: Free QuickTime Ntụgharị
Nkebi nke 3: Online QuickTime MOV Ntụgharị
Nkebi nke 4: Na Knowlege maka MOV na MP4
Tọghata 158 formats, dị ka AVI, MKV, MOV, MP4, wdg
Tọghata kachasị preset fọrọ nke nta niile nke ngwaọrụ.
30X ngwa ngwa akakabarede ọsọ karịa ihe ọ bụla convensional converters.
Ozi kpọtara metadata n'ihi na gị iTunes fim-akpaghị aka.
Akwado os: Windows 8/7 / XP / Vista, Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6
Olee otú iji tọghata QuickTime MOV ka MP4
Free download na wụnye QuickTime MOV Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac). Ọ na-ewe gị nanị anọ nzọụkwụ iji tọghata QuickTime MOV ka MP4, ma ọ bụ iji tọghata MP4 ka QuickTime MOV. Isiokwu n'okpuru ga-enye gị a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ nkuzi na ya Windows version.
Nzọụkwụ 1 Tinye faịlụ ka QuickTime MOV Ntụgharị
Ẹkedori video Ntụgharị wee pịa Tinye Files iji ịgbakwunye faịlụ na ị chọrọ iji tọghata. Ị nwere ike tinye ọtụtụ faịlụ na otu laa dị ka Ntụgharị akwado ogbe akakabarede.
Nzọụkwụ 2 Video edezi (Nhọrọ)
Họrọ video ị chọrọ dezie na iti Dezie bọtịnụ na dị video. Nke a MOV ka MP4 Ntụgharị na-enye gị clipping, cropping, merging na ndị ọzọ na ọrụ. Mgbe edezi video, i nwere ike ntabi preview gị dezie video. Dị egwu gị talent na-eme ka a video masterpiece.
Nzọụkwụ 3 mmepụta Format Setting
Pịa ala akụ button n'akụkụ mmepụta Format bọtịnụ. Na mgbe ahụ see Format na akara ngosi na nri-n'akụkụ aka nke isi interface ma họrọ MP4 dị ka mmepụta formats. Mgbe ahụ, ị nwere ike (ma ọ bụ optionally) kọwaa mmepụta profaịlụ site na ịpị Ntọala bọtịnụ.
Ọzọkwa a ngwa nwere ihe kachasị preset maka dị iche iche ngwaọrụ ma ọ bụ video edezi ngwaọrụ dị ka iMovie ma ọ bụ Final Cut Pro. Ị nwere ike pịa Ngwaọrụ taabụ ịhọrọ ngwaọrụ gị dị ka mmepụta usoro.
Nzọụkwụ 4 Malite QuickTime MOV ka MP4 Nchigharị ugbu a
See tọghata button mgbe niile na-setịpụrụ na conversions ga-agwụ agwụ-akpaghị aka. Ugbu a niile i nwere ime bụ na-eche na iti Open Finder na-enweta videos!
N'ezie, nke a MOV video ka MP4 video Ntụgharị maka Win (Windows 8 na-akwado) nwere ike tọghata fọrọ nke nta niile na-ewu ewu multimedia formats na nzọụkwụ n'elu. Free download na software na-ekiri na video nkuzi n'okpuru.
Video Tutorial: Olee otú Jiri QuickTime MOV ka MP4 Video Ntụgharị on Windows
Part 2: Free QuickTime MOV ka MP4 Ntụgharị
# 1. Free Video Ntụgharị: Wondershare Free QuickTime MOV ka MP4 Ntụgharị
Ị nwere ike iji nke a software iji tọghata nkịtị videos mfe. Ọzọkwa ọ na-ahapụ ị download YouTube videos, ma hazie gị video na a wuru na-video nchịkọta akụkọ.
Pro: Free, tọghata nkịtị videos
1. Ọ nwere format mmachi ka 3D ma ọ bụ HD videos. Ọzọkwa ọ na-apụghị tọghata ngwaọrụ.
2. Akakabarede ọsọ dịtụ ngwa ngwa.
3. Na-ere ọkụ DVD na-adịghị akwado.
4. Ị nwere ike eji naanị ya ka ibudata YouTube videos.
Nkebi nke 3: Online QuickTime MOV ka MP4 Ntụgharị
Nkebi nke 4: Na Knowlege maka MOV na MP4 Format
MOV bụ a filename ndọtị maka QuickTime multimedia faịlụ Ọkpụkpọ. Ọ na-enyere a Nchikota dị iche iche nke multimedia data (video, ọdịyo na ederede). MP4 bụ a akpa format iji ya iji chekwaa video, audio, na ndepụta okwu data.Since-echekwa dị ka iTunes-eji nke a akpa format, ọ na-eji na iPod na PlayStation (PSP). Ọ na-aghọ a na-ewu ewu usoro.
Apple Inc Akpụ akpụ Foto dị ọkachamara Group
Ihe ọmụma zuru ezu na MOV faịlụ Ọkpụkpọ
Olee Ọkụ QuickTime MOV ka DVD
Olee mbupụ iMovie ka Video
Olee mpikota onu MOV faịlụ
Olee otú iji tọghata QuickTime (MOV) na Windows Media Player Ihe ọmụma zuru ezu na MP4 faịlụ Ọkpụkpọ
Olee otú mpikota onu MOV Files (QuickTime) na Mac / Win
Olee otú iji tọghata MTS ka MP4 na Mac / Win
Olee otú iji tọghata Videos n'etiti mpg na AVI
Olee otú iji tọghata mpg ka MOV na Mac / Windows (Windows 10 gụnyere)
> Resource> tọghata> Olee otú iji tọghata QuickTime MOV ka MP4 kasị na Win / Mac (Yosemite gụnyere)